Wasiirka maaliyada oo qalab kala duwan ku wareejiyay wasaarrado ka tirsan xukuumada
Mjournal :–Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Aden Ibraahim Ferkeeti ayaa maanta ku wareejiyey qalab ka kooban Kombuyuutaro, Laabtoobyo, Birintiro iyo Footokoobiyo hay’adaha dowladda. Qalabkaan ayaa loo isticmaalayaa nidaamka cusub ee...
Madaxweynaha Galmudug oo ka digay dhigasha isbaarada
Mjournal :–Madaxweynaha dowlad gobolleedka Galmudug oo Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug kula hadlay Qaybaha bulshada, ayaa soo Hadal-qaaday dhibaatada kooxaha dhigta is-baarooyinka dhigta deegaanada Galmudug ay dadka iyo nolosha bulshadaba ku hayaan. C/kariin Guuleed,...
Shariif Sheekh Axmed iyo C/raxman Faroole oo lagu marti-qaaday xuska 18 May Somaliland
Mjournal :–Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel-gaarka Soomaaliya iyo C/raxmaan Max’ed Faroole oo horay u soo noqday madaxweynaha Puntland, ayaa la shegay in labadaba lagu marti-qaaday xuska gooni isku taagii Soomaliland 18 May. Sida uu qoray...
Ceelamo saarka madaxweyne Geelle oo ka socta dalka Jabuuti
Mjournal :–Magaaladda Jabuuti ee Caasimada Jamuuriyadda Jabuuti waxaa gaaray Madax dhowr ah oo ka qeyb galayo caleemo saarka iyo dhaarinta Ismaaciil Cumar Geelle oo mar kale ku guuleystay Madaxtinimada wadanka Jabuuti. Waxaa Jabuuti maanta ka dhici doonto xafaladda caleemo...
Shariif Sheekh Axmed oo Jabuuti kula kulmay Siilaanyo iyo Gaas
Mjournal :-Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo booqasho ku jooga wadanka Jabuuti ayaa kula kulmay Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo kan Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas. Labada dhinac ayaa waxay ku kulmeen hotelka Kamdiski oo ay...
Uganda oo beenisay in ay ciidamadeeda kala baxeyso Soomaaliya
Mjournal :–Dowladda Uganda ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay in ay la baxeyso ciidammada ka jooga dalka Soomaaliya, kuwaasoo qeybta ka ah howl galka AMISOM. Afhayeenka Ciidamada Uganda Paddu Ankunda ayaa sheegay in warkaas uu yahay mid xaqiiqda ka fog, isla markaana...
Gancasade caan ahaan oo caawa fiidkii lagu dilay Gaalkacyo
Mjournal :–Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in rag hubeysan caawa fiidkii ku dileen Waqooyiga Degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug Ganacsade caan ah, kaasoo ahaa Maareeyaha Shirkadda Isgaarsiinta SOMTEL ee Gobolka Mudug. Ganacsadahan la toogtay oo...
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo la caleemo saarayo maalinta berri ah
Mjournal :–Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maalinta berri lagu wadaa in loo caleema saaro xilka madaxtinimada, kadib markii bishii hore ee April uu ku guuleystay doorashada markii afaraad. Caleema saarka Madaxweyne Geelle ayaa waxaa ka qeyb geli doona madax...
Qarax ka dhacay suuqa bakaaraha iyo khasaare ka dhashay
Mjournal :–Inta la og-yahay saddex ruux oo laba ka mid ah ay yihiin Askar ka tirsan ciidamada dowladda Somalia ayaa ku dhaawacmay qarax bambo oo lagula eegtay gudaha Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho. Wararku waxaa ay sheegayaan in askartan dhaawaca soo gaaray ka tirsanaayeen...
Go’aanka dowladda Kenya ay ku xireyso xeryaha qaxootiga oo la cambaareeyay
Mjournal :–Dowladda Kenya sheegtay in ay qaxootiga oo ku sii sugnaada dalkeeda ay khatar ku tahay ammniga iyo xasiloonida dalkeeda. Hadaba hay’adda xaquuqda aadanaha ee Huma Rights Watch ayaa cambaareysan go’aankaa ay dowladda Kenya ku qaadatay in ay xireyso...
Sadiq Khan muslimkii ugu horeeyay oo noqday duqa magaalada London
Mjournal :–Sadiq Khan ayaa loo doortay Duqa caasimada London, isagoo noqonaya ninkii u horeeyay oo Muslim ah oo xilkaas loo doorto. Waxaa uu ka tirsanaa Xisbiga Shaqaalaha, waxaana la tartamayay Zac Goldsmith oo ka socday Xisbiga muxaajidka oo muddo 8-sano ay hayeen xilka...
Avv Ceydiid Ilka Xanaf” ma doonayo in uu dalku galo khalalaase dastuuri ah
Mjournal :–Guddoomiyihii hore ee Maxkamada Sare ee dalka, Ceydiid C/llaahi Ilka-Xanaf oo shir jaraa’id xalay ku qabtay Madaxtooyada Somalia, ayaa sheegay inuusan doonayn in dartiisu uu dalku qalalaaso siyaasadeed iyo mid dastuur u galo. Avv. Ilka-Xanaf ayaa sheegay inuu soo...
Wasiirka ammniga Puntland oo xaalad caafimaad loogu qaaday dalka dibadiisa
Mjournal :–Magaalada Boosaaso ayaa wararka ka imanaya sheegayaan in wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) oo maalmo ka hor ku dhaawacmay is rasaaseyn dhex martay ciidamo ka tirsna Puntland loo qaaday dalka Jabuuti. Dhaawaca Wasiirka oo markii hore ahaa mid...
Ilka Xanaf oo aqbalay xil ka qaadistii uu ku sameeyay dhawaan madaxweyne Xassan Sheekh
Mjournal :–Ugu danbeyntii guddoomiyihii maxkamada sare Avv. Ceydiid Cabdulaahi Ilka-Xanaf ayaa sheegay in uu aqbalay xil ka qaadistii uu Madaxweynaha Soomaaliya ku sameeyay 4-tii bishan, Shir jaraa’id oo uu Ika xanaf xalay ku qabtay xarunta Madaxtooyada ayuu Avv. Ceydiid...
Luis Suarez oo ugu hambalyeeyay kooxda Liverpool guusha ka ay ka gaartay koobka Europa League
Mjournal :– Xiddigii hore ee Liverpool Luis Suarez ayaa ugu hambalyeeyay kooxdiisa hore inay gaareen finalka koobka Europa League. Weeraryahanka Barcelona ayaa daawaday iyadoo Reds ay 3-0 ku xaaqday kooxda Villarreal islamarkaana ay buukimatay booskeeda finalka Basel ka...
Dowladda Kenya oo joojiyneysa marti-galinta xaqootiga Soomaalida
Mjournal :–Dowladda Kenya ayaa maanta shaacisay in aysan marti-gelin doonin wixii hadda ka dambeeya dadka Soomaaliyeed ee qoxooti ahaana u galaya dalkeeda, iyadoo sheegtay inay baqdin ka qabto amni-darro. “Dowladda Kenya oo tixgelinaysa danaha amniga Qarankeeda, wax...
Uganda oo dib u eegis ku sameyneysa ciidammadeeda ka jooga Soomaaliya
Mjournal :–Saraakiisha ciidamada Uganda ayaa wada qorshe ay dib ugu eegayaan ciidamadeeda nabad-ilaalinta ah ee ku sugan Somalia iyo Dalka Afrikada dhexe, taasoo u muuqata inay qorsheynayaan inay ciidankooda la baxaan. Afhayeenka Millateriga Uganda, Col. Paddy Ankunda ayaa...
Warar ku saabsan xaalada gabdhii Soomaaliyeed ee isku gubtay Jasiirada Nauru
Mjournal :–Waxaa wali adag xaalada nolaleyd ee Hodan Axmed Barre, oo ah gabar Somaliyeed oo 21 jir ah, taasoo Isniintii isku gubtay xero qaxooti oo ku taala Jazeerada Nauru. Waaxda Caafimaadka Australia, ayaa maalintii Talaadada si deg deg ihi kaga soo qaaday gabadhaasi...
Guddiga garsoorka oo soo dhaweeyay xil ka qaadistii guddoomiyaha maxkamada sare
Mjournal :–Shir magaalada Muqdisho ay ku yeesheen xubno ka tirsan garsoorka dalka ayaa waxaa ka qeyb galay xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Axmed Cali Daahir Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Benaadir Xaashi Cilmi Nuur, Qareenno iyo garsoorayaal, waxaana lagu soo...
Taliska militariga oo faah faahin ka bixiyay howlgal laga sameeyay Sh/dhexe
Mjournal :–Saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixiyay howl galada ka socda deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe, kadib markii shalay Ciidamada ay la wareegeen tuulooyin hoos-taga degmada Ruun-Nirgood. Abaanduulaha ciidanka Milateriga Jen. Cali Baashi ayaa...